လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသနဖျေါပွခကျြနမူနာ – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် / လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသနဖျေါပွခကျြနမူနာ
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 18, 2016 လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် Leave 470 views
အခြားလူမှုရေးနည်းပညာလေ့လာမှုမှာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ Assist, မေးခွန်းပုံစံ, လည်းဓာတ်ခွဲခန်း. အရည်အသွေးအ-ထိန်းချုပ်မှုအကူအညီကိုကူညီနိုငျ, လက်တွေ့အကဲဖြတ်, သို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုစစ်ဆင်ရေးနှင့်သတင်းလွှာဘို့ကောက်ချက်များကို ပြင်ဆင်..
ပြင်ဆင်ထား, ညှိ, နှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ directory များကိုင်တွယ်.
ခံဝန်၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူအကူအညီပေး – ဆက်စပ်လေ့လာမှုများ, စာမူ, နှင့် display တွေ.
၎င်းတို့၏မိဘများသို့မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေး themes များ၏အသိပေးသဘောတူညီခကျြကိုရယူလိုက်ပါ.
သတင်းအချက်အလက် multivariate နှင့်ဖော်ပြထားတာသင်္ချာရှင်းလင်းချက်ပြီးမြောက်, PC ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီး.
ပရိဘောဂ Make, မြေပုံ, တကယ်တော့အိပ်ယာ, နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလေ့လာမှုရလဒ်များရှင်းလင်း created ဖြစ်ကြောင်း.
-centered နှင့်စာကြည့်တိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးစီရင်ခဲ့ Net က.
စီမံကိန်း၏အောင်မြင်မှုလိုအပ်အဖြစ်ဒေတာ-entry ကိုများနှင့်အခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လုပ်ရပ် execute.
စာရင်းအင်းစာမေးပွဲနှင့်အချက်အလက် entry ကိုနှင့်အဝတ်လျှော်အပါအဝင်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်တိကျသောဖြစ်ကြောင်း packages များဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုး.
ကွန်ပျူတာ entry ကိုများအတွက် prep အတွက် Code ကိုဒေတာ.
ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်မေးခွန်းများအတွက်အဖြစ်မေးခွန်းလွှာ devices များအတွင်း၌ထောက်ခံမှုပေး’ စတိုင်.
အခြားအ-လူတွေပြည့်စုံအာရုံကိုပေးအခိုင်အမာအဘယ်အရာကို active-နားထောင်ခြင်း-ရန်,, သငျသညျကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိအသေးစိတ်နားလည်ရန်အချိန်ယူ, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးခွန်းများကိုတောင်းဆို, နှင့်မလျော်ကန်ဖြစ်ကြောင်းအချိန်လေးမှာလမ်းပြနေမဟုတ်.
ထိထိရောက်ရောက် data တွေကိုဝေမျှဖို့အခြားသူများအားဆက်သွယ်-Talking.
critical အတွေးအခေါ်-အသုံးချပြီးဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်အားနည်းချက်များကိုနှင့်ချဉ်းကပ်၏အခွက်အသိအမှတ်ပြုရန်အကြောင်းရင်းများ, ဒုက္ခမှရလဒ်များကိုသို့မဟုတ်အစားထိုးရွေးချယ်မှုများ.
သင်ယူခြင်းသို့ချဉ်း ကပ်. -အလုပ်နှင့်လတ်ဆတ်သောအရာတို့ကိုသင်ယူသို့မဟုတ်နည်းပြအလုပ်ကိုအခါတိကျတဲ့အခွအေနေအဘို့သင့်လျော်သော instructionPEReducational မဟာဗျူဟာများနှင့်နည်းလမ်းများရွေးချယ်ရာတွင်.
ကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦးချင်းစီ၏စောင့်ကြည့်ခြင်း-MonitoringANDEvaluating ထိရောက်မှု, မိမိကိုယ်ကို, သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု generate သို့မဟုတ်မှန်ကန်သောလုပ်ရပ်များယူ.
အခြားသူတွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ control-မွမ်းမံလုပ်ရပ်များ’ လှုပ်ရှားမှုများ.
ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာအဆင့်မြင့်ကိစ္စများ-ခွဲခြားဖြေရှင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာအခြားနည်းလမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အကဲဖြတ်နဲ့ options ဆောကြောင်းသတင်းအချက်အလက် critiquing.
စစ်ဆင်ရေးအားသုံးသပ်ခြင်း-လေ့လာတဲ့စတိုင်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးကို item လိုအပ်ချက်များကို.
လူတစ်ဦးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကူညီပေးဖို့နည်းပညာဒီဇိုင်း-ပြောင်းခြင်း tools များသို့မဟုတ်ခြင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာ.
installation-Installing မော်ဒယ်များ, ပစ္စည်းကရိယာ, ဝါယာကြိုးများ, features တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် applications များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-ကိုကြည့်ရှုခြင်းကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာ, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်ညွှန်းကိန်းမှန်ကန်စွာဖျော်ဖြေကိရိယာလည်းမရှိသေချာစေရန်.
tools တွေအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခါ upkeep အမျိုးအစားလိုအပ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကြောင်းကို Maintenance-ဖျော်ဖြေ upkeep.
အမှားများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်မဆိုနှင့် ပတ်သက်. သွားကြဖို့အဘယ်အရာကိုဦးတည်ချက်အဆုံးအဖြတ်၏ troubleshooting-ကိုစူးစမ်းအကြောင်းတရားများ.
ပြုပြင်တာတွေ-ပြုပြင်ခြင်းလိုအပ်သောနည်းလမ်းများအသုံးချဖို့ devices များသို့မဟုတ်နည်းစနစ်.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးသုတေသန-ပွုလုပျခွငျးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုန်စည်စမ်းသပ်ခြင်း, န်ဆောင်မှုများ, သို့မဟုတ်နည်းစနစ်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်သို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မှ.
ဉာဏျပညာနှငျ့အကြိုးခံစားခှငျ့နှငျ့အကောငျးဆုံးသင့်လျော်သောတဦးတည်းကိုရှာဖွေနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူ၏အထွေထွေစွဲချက်နှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း-အတွေးအခေါ်.
analysis-ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အစီအစဉ်ကိုအလုပ်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ဘယ်လောက်တိုးတက်မှု, ဝေဒနာတွေက, နှင့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ရလဒ်များကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ.
တဦးတည်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယခုအချိန်တွင်အဖြစ်အခြားသူတွေ Timemanagement-စီမံခန့်ခွဲ’ အချိန်.
ဝန်ထမ်းများအရင်းအမြစ်များ-Developing ၏အုပ်ချုပ်ရေး, လှုံ့ဆော်, သူတို့အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းပုဂ္ဂိုလ်များလမ်းညွှန်, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အဘို့အထိပ်ရှေးရှေးဖော်ထုတ်.
Affiliate ရဲ့ပမာဏ (သို့မဟုတ်နောက်ထပ်2နှစ်ဒီပလိုမာ)
ထက်ပိုပြီး 1 နှစ်, နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲမှ-Up နှင့်အပါအဝင်
ဇွဲ – 92.84%
ကြိုးစားအားထုတ်မှု – 94.90%
စီမံခန့်ခွဲမှု – 79.21%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 89.75%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာ – 86.28%
ယဉ်ကျေးမှု Direction အဖွဲ့ – 84.89%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 84.49%
စိတ်ဖိစီးမှုစာနာထောက်ထားရေး – 81.65%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 93.95%
Depth ၏အသိအမြင် – 92.90%
ရိုးသားခြင်း – 94.09%
လွတ်လပ်ရေး – 94.50%
တိုးတက်ခြင်း – 87.76%
analytical အတွေးအခေါ် – 93.03%